မိုးလေဝသသတင်း | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မိုးလေဝသသတင်း. Show all posts
မုန်တိုင်းငယ် မြန်မာသို့ ဦးတည်မည့် အခြေနေ မရှိသဖြင့် အဝါရောင် အဆင့် သတ်မှတ်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက် အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းသည် ပိုမို အားကောင်း လာကာ မုန်တိုင်းငယ် (Depression) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး၊ မုန်တိုင်းငယ်၏လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေ အနေ မရှိပါသဖြင့် အဝါရောင် အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ကြောင်း မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပူရီမြို့၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၂၀၀)ခန့်၊ ချန့်ဘာလီမြို့၏ တောင်ဘက် မိုင်(၂၅၀) ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေကြောင်း ၊မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သြရိဿကမ်းခြေကို ပူရီမြို့နှင့် ချန့်ဘာလီမြို့တို့ အကြားမှ ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း သိရသည်။
၎င်းမုန်တိုင်းငယ်သည် မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၀:၃၀)နာရီအချိန်တွင် မြောက်လတ္တီကျု (၁၆.၅) ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၈၆.၅)ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက်လေဖိအား (၁၀၀၀)ဟက်တိုပါ စကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင်နှုန်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ထို့ကြောင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေးငါးဖမ်း ရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ အနေဖြင့်လည်း ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန် မိုးဇလမှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
From : Xinhua-Myanmar
Originally published at - xinhuamyanmar.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, October 20, 2017 No comments:
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်အထိ မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မုန်တိုင်း အခြေအနေ
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ပိုမို အားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခု ဖြစ်လာပါ တယ်။ မုန်တိုင်းငယ် ဟာ သိသိသာသာ အားကောင်းလာခြင်းမရှိနိုင်ဘဲ အိန္ဒိယအရှေ့ ဘက်ကမ်းရိုးတမ်းတစ်လျှောက် အရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျား သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ
ကပ္ဗလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့်မှတိမ်ထူထပ်နိုင်ပါ တယ်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ တိမ်ထူထပ်နေပြီး ကျန်ဒေသတွေမှာ တိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ လှိုင်းအမြင့်လေးပေမှ ခြောက်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။
နေ့အပူချိန်တွေ အနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစွန်းတို့တွင် နေ့အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၃၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစွန်းတွင် နေ့အပူချိန် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်နဲ့ ကျန် တစ်ပြည်လုံးတွင် နေ့အပူချိန် ၃၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ပြည်လုံးမှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်းအလွန်မြင့်မားအဆင့်တွင် ရှိနိုင်ပါတယ်။
မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာများကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတို့မှာ ဖြစ်ပေါ်ရန်သေချာမှု ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း မှ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကယားပြည်နယ်တို့မှာ ဖြစ်ရန်သေချာမှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် နဲ့ ကျန်ဒေသ တွေမှာသာယာနိုင်ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းတို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနဲ့ကျန်ဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကျားမိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၅ ခုမှာ မိုးကြီးနိုင်
စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ မွန်နဲ့ နေပြည်တော် စတဲ့ တိုင်းဒေသ ကြီးနဲ့ ပြည်နယ် တွေမှာ ရက်ပိုင်း အတွင်း မိုးကြီးနိုင် တယ်လို့ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
အဲဒီလို မိုးကြီးနိုင်တဲ့အတွက် မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းနဲ့ ပခုက္ကူမြို့တွေမှာ ဧရာဝတီမြစ်ရေဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်မှာ ရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မြစ်ရေခန့်မှန်းရေးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်းမော်က ပြောပါတယ်။
"ဒီမြစ်ရေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကတည်းက စတက်တာပေါ့။ တက်နေတဲ့ ရေတွေပေါ့။ ဧရာဝတီမှာတော့ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းကတော့ ပေ၀က် စီလောက် ရှိသေးတယ်။ စိုးရိမ်ရေမှတ် အထက်ကိုပေါ့။ ပခုက္ကူကတော့ နှစ်ပေလောက် ရှိသေးတယ်။ ညောင်ဦကတော့ သုံးပေလောက် ရှိသေးတယ်"
လက်ရှိအချိန်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ရေဟာ ပခုက္ကူ၊ ညောင်ဦး၊ ဟင်္သာတ၊ ဇလွန်မြို့တွေမှာ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ကျော်နေပြီး င၀န်မြစ်ရေဟာလည်း ငါးသိုင်းချောင်း မြို့မှာ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ကျော်လွန်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနက သြဂုတ် ၂၂ ရက်နေ့အထိ ရရှိထားတဲ့ စာရင်းတွေအရ စစ်ကိုင်း၊ ဧရာဝတီနဲ့ မန္တလေး စတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ရေဘေးကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ ရတဲ့ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂ သောင်း ၃ ထောင်ကျော်၊ လူဦးရေပေါင်း ၉ သောင်း ၈ ထောင်ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်တာကြောင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့က အိမ်ထောင်စု ၅၀၀ ကျော်၊ လူဦးရေ ၂ ထောင်လောက် ရေလွတ်ရာကို ပြောင်းရွှေ့နေရပြီး မန္တလေးတိုင်း အမရပူရ မြို့နယ်မှာလည်း လူဦးရေ ၂၀၀၀ ကျော်လောက် ရေလွတ်ရာကို ရွှေပြောင်းနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကဏ္ဍ မိုးလေဝသသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း
လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း အိန္ဒိယ ကမ်းခြေ အနီးရွှေ့လျား ၀င်ရောက်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ် အော်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိ အားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သြရိဿ ကမ်းခြေ အနီးမှ ရွေ့လျား ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီလို့ မိုးဇလ ဌာနက ဒီကနေ့ မနက် သတင်း ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေ တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သြရိဿ ကမ်းခြေနဲ့ အနောက်ဘင်္ဂလား ကမ်းခြေတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေ တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေတယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ တခါတရံ မိုးသက် လေပြင်းတွေကျရောက်ပြီး လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်၊ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/ မြေပြင်လေဟာ တစ်နာရီလျှင် ၃၅ မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပြီး လှိုင်းအမြင့် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် ၇ ပေမှ ၁၀ ပေခန့် ရှိနိုင်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/214460
မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် (ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့)
တစ်ပတ်စာ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက်
မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်ရဲ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့ တစ်ပတ် အတွင်း မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် ရုပ်သံကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
From : 7DayDaily - YouTube
Original link - https://www.youtube.com/channel/UCKhJYsH3mZp4zGPNKUWRNzQ
မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိနေဟု မိုးဇလပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင် ခန့်မှန်း
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်၊ တောင် တရုတ် ပင်လယ် ပြင်နဲ့ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း ရေပြင်တို့မှာ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လေထု မတည်ငြိမ်မှုတွေ စတင် ဖြစ်ပေါ် လာနေပြီလို့ မိုးလေ၀သ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်က ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၀ရက်နေ့ ည ၆း၃၀ နာရီမှ နောက် ၄၈ နာရီ အတွက် ခန့်မှန်းချက်ကို ဒီကနေ့ မနက် ထုတ်ပြန် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးဇလဌာနကတော့ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာ မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်း နေတယ်လို့ ဒီကနေ့ မနက် ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းတွေ ကျရောက်ပြီး လှိုင်း အသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်၊ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/ မြေပြင်လေဟာ တစ်နာရီလျှင် ၃၅ မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်တယ်၊ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ၆ ပေမှ ၉ ပေခန့် ရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – U Tun Lwin Facebook
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/213652
ဒေသ ငါးခုတွင် ရေနှင့် လေဘေး အန္တရာယ် သတိပြုရန် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် သတိပေး
တိုင်း ဒေသ ကြီးနှင့် ပြည် နယ်ငါး ခုတွင် ရေဘေးနှင့် လေ ပြင်းဘေး ရင်ဆိုင်နေ ရကာ နေရာ ကွက်မိုးကြီးမှုနှင့် လေပြင်း အန္တရာယ် ကြီးမား နေကြောင်း မိုးလေဝသ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က သတိပေးသည်။
ဇွန်လဆန်းရက်များက စ တင်ကာ ရခိုင်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်မိုးသည်းထန်စွာ ရွာခဲ့ ပြီး ရေ လွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်စဉ်များ မကြာခဏ ရင်ဆိုင်ရပြီး ရေဘေးနှင့် လေပြင်းအန္တရာယ်ကြောင့် လူသေဆုံးမှုအချို့ရှိခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေအားကောင်းနေ၍ မိုးဆက်လက်အားကောင်းနေကာ လေပြင်းအန္တရာယ်လည်း သတိပြုရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က သတိပေးထားသည်။
‘‘မိုးက ကောင်းနေဦးမယ်ဆို တော့ ရေဘေးကို သတိထားဖို့ လို မယ်။ အရင်ရက်တွေကလည်း မိုး ကောင်းခဲ့တယ်။ အခုထိ မရပ် သေးဘူးဆိုတော့ ရေလွှမ်း မိုးမှု ဘေးက ဂရုစိုက်ရမယ်။ လေပြင်း အန္တရာယ်ပါ တွဲပါနေတာ’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဇွန်လ ၁၉ ရက်က စစ်ကိုင်း တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် နေရာကွက်မိုးကြီးခဲ့သည်။ လေ ပြင်းနှင့် မိုးကြိုးလည်း တစ်ပြိုင် နက်ကျရောက်ခဲ့ပြီး ဖောင်းပြင်မြို့ နယ်တွင် မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍ နွားတစ် ကောင်သေဆုံးခဲ့သည်။
ပဲခူးမြို့ နယ် ဥဿာမြို့သစ်တွင် လေပြင်း ကြောင့် စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြိုကျခဲ့သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေ သကြီး ငပုတောမြို့နယ်တွင် လေပြင်းကြောင့် စာသင်ကျောင်းတစ် ဆောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း လူမှု ဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ကယ်ဆယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သတင်း ရရှိသည်။
ကချင်ပြည်နယ် တွင် နေရာကွက် မိုးကြီးနေကာ မိုးမောက်မြို့နယ်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်နှင့်ကပ်လျက် အင်ခေါင်းပါ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအနီးမှ အင်ခေါင်း ချောင်းရေလျှံမှု ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်ကဖြစ်ခဲ့၍ စစ်ဘေးရှောင် စာသင်ကျောင်း ယာယီပိတ်ခဲ့ရ ကြောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာ ဝန်ခံက ပြောသည်။
ဇွန်လ ၁၇ ရက်နှင့် ၁၈ ရက်က ကချင်ပြည် နယ် ဖားကန့်ဒေသတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း၍ ဒေသခံများ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုရင်ဆိုင်ရသည်။
လတ်တလောမိုးကောင်းနေ သည့် ဒေသများဖြစ်သော ရခိုင် ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက် ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရန် ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန် ထားသည်။
From :7Day daily news By: အောင်သစ်လွင်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/99516
ကဏ္ဍ မိုးလေဝသသတင်း, အသိပေးခြင်း
မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် (ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့)
မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်ရဲ့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့ တစ်ပတ် အတွင်း မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် ရုပ်သံကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, မိုးလေဝသသတင်း
ရခိုင်မှာ ၁၂ နာရီအတွင်း မိုးများနိုင်
ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ လာမယ့် ၁၂ နာရီ အတွင်း မိုးများ နိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် က ပြောပါတယ်။
မိုးသည်း ထန်နိုင်တဲ့ တိမ်တိုက် တစ်ခုဟာ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း ရွေ့ လျားနေ တာကြောင့် ဒီနေ့ ညနေက စပြီး မိုးများ နိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
"ခန့်မှန်းချက်တော့ ထုတ်ထားတယ်။ လောလောဆယ်လည်း မိုးများနေတယ်နော်။ ရခိုင်အလယ်ပိုင်းတွေမှာ စစ်တွေတို့ ဘာတို့ကတော့ စပြီနော်။
နည်းနည်းတော့ သတိထားရမယ်။ အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့။ ဒီနေ့ မိုးရွာနိုင်တဲ့ တိမ်တိုက်တစ်ခုက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကို ရွေ့နေတာတွေ့တယ်။
အဲဒီတော့ ခန့်မှန်းခြေ ဒီနေ့ညနေပိုင်းလောက်စ မိုးရွာမယ်လို့ မှန်းလို့ရတယ်လေ။ ဒီကောင်က ဒီနေ့ရောက် လို့ မိုးရွာရင် နောက်နေ့ကျရင်တော့ အတွင်းဘက် ရောက်သွားမှာပေါ့နော်"
အခုအချိန်မှာလည်း ရခိုင်ပြည်နိုင်မှာ မိုးများနေတာကြောင့် အခု ထပ်ရွာမယ့် မိုးကြောင့် ရေကြီးတာတွေ မြေပြို တာတွေ စတဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
မနေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ မိုးကြီး ခဲ့တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်အထိတော့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ မိုးရွာနိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်နဲ့ ပဲခူးတိုင်းတို့မှာ နေရာ ကွက်ပြီး မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Friday, June 16, 2017 No comments:
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မုန်တိုင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ မုန်တိုင်း ငယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့် ရခိုင် ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်မှာ မိုးရွာသွန်းမှု ဆက်ရှိ နိုင်ပြီး မြစ်ရေကြီး တာတွေ၊ ကမ်း ပါး ပြိုတာတွေ ဖြစ်နိုင် တာမို့ သတိထားဖို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတိပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ မိုးနည်းနိုင်ပေမယ့် နောက်ရက် ပိုင်းတွေမှာ မိုးကြီး လာနိုင်မယ့် အလားလာ ရှိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်လျှောက် မိုးအားကောင်းခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအခြေ အနေအရ ဒီတရက်၂ရက်မှာ မိုးအရှိန်အားပျော့လာဖွယ်ရှိနေပေမယ့် နောက်ရက်တွေမှာတော့ မိုးကောင်းလာနိုင်တာမို့ မြစ်ရေကြီးတာတွေ၊ ကမ်း ပါးပြိုတာ တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှထွန်းကပြောပါတယ်။.
“အဓိကတော့ ဒီဇွန်လကုန် နောက်တခါ ဇူလိုင်ဆိုရင် ကျနော်တို့က မိုးလယ်ကာလရောက်ပြီ ၊ မိုးဦးကာလထက် မိုးများဖို့ရှိတယ်။ ဇွန်လထဲမှာလည်း အဓိ ကတော့ မိုးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ မြစ်ရေပေါ့နော် ၊ မြစ်ရေတက်လာမယ့်အခြေအနေကိုတော့ အထူးသတိထားဖို့ လိုတယ်။ နောက်မိုးများတဲ့နေရာတွေမှာ ၊ မိုးများလို့ ရေမြုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ထပ်ပြီးမိုးများရင်တော့ မြေပြိုမှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်လာနိုင်တယ် အဓိကတော့ ဒါတွေသတိထားဖို့လိုတယ်။”
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့် အပြင် မိုးတွင်းကာလလယ်ကိုရောက်လာတာမို့ ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်တာ လို့သူကတော့ဆက်ပြောပါတယ်။ မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတို့မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေတဲ့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအတော်များများမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ဆက်တိုက် ရွာသွန်းနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
“အခုလက်ရှိလာမယ့် အခုက ၁၅ ရက်ဆိုတော့ နောက်လာမယ့် ၂ ရက် ၁၇ ရက်နဲ့ ၁၈ ရက်မှာတော့ ဒါ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်လည်း မိုးများဖို့ရှိတယ်။
ခုနကပြောသလို ချင်းပြည်နယ်တို့ဘာတို့ကတော့ အခုလက်ရှိမှာတော့ အရင်ရက်တွေကတော့ မိုးမများနိုင်ဘူးလေ မုတ်သုံက ၂ ပိုင်းကွဲနေတာကို ။
တောင်ပိုင်းဘက်မှာ မုတ်သုံကလျော့နေတယ်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာကတော့ မုတ်သုံက အားကောင်းနေတယ်။နောက်လာမယ့် ၂ ရက် ၁၇ ရက်နဲ့ ၁၈ ရက်မှာတော့ ရန်ကုန်တို့ ၊ ဧရာဝတီတို့ကတော့ ဒါ မိုးများမယ့် အလားအလာတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော် အဲဒါကြောင့် လက်ရှိမှာတော့ မုတ်သုံက ရခိုင်ဘက်မှာပဲ လက်ရှိကောင်းနေတယ်။ မကွေးတို့ ဘာတို့ကတော့ လျော့သွားဖို့ အလားအလာရှိနေတယ်ပေါ့နော်။”
မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့မှာ ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်း တို့မှာ မုတ်သုံလေ အားအနည်းငယ်မှ အားအသင့် အတင့် ရှိနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေတာမို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည် နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသအလိုက်၊ နေပြည်တော်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီး နိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာကိုပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ မကွေးတိုင်းတို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတာမို့ ရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အိမ်တွေရေလျှံတာအပြင် တံတားတွေပါ မျောပါလို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (မေခ)
ကဏ္ဍ မိုးလေဝသသတင်း, အသံဖိုင်
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း လေပြင်းထန်နိုင် မိုးဇလ သတိပေး
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့ အရှိန်ကြောင့် ရခိုင် ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်မှာ မိုးရွာသွန်းမှု အားကောင်းပြီး လေပြင်းထန် လာနိုင် တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတိပေး လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် မြေပြင်လေတိုက်နှုန်းဟာဆိုရင် ၁ နာရီကို မိုင် ၄၀ အထိ တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့လဲ သတိပေးထား ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအုိုအေသတင်းထောက် ကိုကောင်းစံဟိန်းက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်လျှောက် မိုးအားကောင်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးက သတိပေးတာပါ။
“လောလောဆယ်တော့ လက်ရှိမှာတော့ ခုနကပြောတဲ့ မုန်တိုင်းငယ်နဲ့ တိုက်လာတဲ့ လေတွေရှိတာပေါ့နော်၊ နောက်ပြီးကျတော့ မုတ်သုံအင်အားကလည်း တအား အားကောင်းနေတဲ့ အတွက် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတလျောက်မှာတော့ လေကတော့ ပြင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ် အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ကို ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတွေမှာ ကျနော်တို့ မိုင် ၄၀ နဲ့ ထုတ်ထားပါတယ်။”
မုန်တိုင်းငယ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ၀င်ရောက်လာနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ အဲဒီမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်နဲ့ တစ်နာရီကို မိုင်လေးဆယ်အထိ လေပြင်း တိုက်ခိုက် လာနိုင် တာကြောင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေက သဘောင်္တွေကိုလည်း မထွက်ဖို့ကိုလည်း ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးက သတိပေးထားပါတယ်။
“အဓိကတော့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ မိုင် ၄၀ ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ သဘောင်္တွေမထွက်ဖို့ပေါ့နော် ။နောက်တခုကတော့ မိုင်၄၀ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတွေမှာ လေပြင်းတိုက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ကို ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် ကျနေ်ာတို့ထုတ်ထားတာရှိတယ်။”
မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့ အရှိန်ကြောင့် ဇွန်လ ၁၁ ရက်ညနဲ့ ၁၂ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွေမှာ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ဧရာဝတီ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက် မိုးကြီးပြီး လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်း ရိုးတရုပ်ကျေးရွာမှာတော့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက လေပြင်းမုန်တိုင်း ၀င်ရောက်တိုက် ခတ်သွားပြီး သေဆုံးသူ ၂ ဦးရှိတယ်လို့ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ကယ်ဆယ်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်က ပြောပါတယ်။
“ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ရိုးတရုပ်ကျေးရွာမှာတော့ ၁၂- ၆- ၂၀၁၇ မှာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် လူနေအိမ် ၁၈ လုံး ပျက်စီး သွားပြီးတော့မှ အိမ်ထောင်စု ၁၈ စုပေါ့နော် လူဦးရေ ၈၆ ဦးရှိတယ်ပေါ့ အဲဒီအထဲမှာ ကျား ၁ ဦး၊ မ ၁ ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်၊ ကျား ၁ ဦး မ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိတယ်။ စုစုပေါင်း သေဆုံး ၂ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၄ ဦး ၊ ဘေးဒဏ်ခံစားရသူကတော့ ၈၆ ဦးပေါ့နော် အိမ်ထောင်စု ၁၈ စုကပေါ့နော်။”
ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကတော့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတလျှောက်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ မိုးရွာနုိုင်ပေမဲ့ အားလျော့ ကျသွားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်လျှောက်ကိုတော့ လေပြင်းအန္တရာယ် ဆက်ပြီး သတိပေးထားပါတယ်။
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Wednesday, June 14, 2017 No comments:
မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ အထိ
ဘင်္ဂလား ပင်လယ် အော်နဲ့ တောင် တရုတ် ပင်လယ်ပြင် အခြေ အနေ
ကပလီ ပင်လယ် ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ် အော် တောင်ပိုင်း တို့မှာ တိမ် အသင့် အတင့်မှ တိမ် ထူထပ် နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွေမှာ တိမ်ထူထပ် နိုင်ပြီး ကျန်ဒေသ တွေမှာ တိမ် အသင့် အတင့် ဖြစ်ထွန်း နိုင်ပါတယ်။
ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပါတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းကြီးနိုင်ပြီး ကျန်မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းအသင့် အတင့် ရှိပါမယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်း ရိုးတန်းနဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းအမြင့် ငါးပေခန့်မှ ရှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပြီး ကျန်မြန်မာ့ကမ်းရိုး တန်းနဲ့ ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းအမြင့် သုံးပေခန့်မှ လေးပေခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
နေ့အပူချိန်တွေဟာ ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည် နယ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ ၂၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ ၂၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ခန့် ၊ ကျန်ဒေသတွေမှာ ၂၉ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ ၃၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်းများ အခြေအနေ
ကချင်ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်းစွန်း) မှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အညွှန်းကိန်း အလွန်မြင့်မားအဆင့်မှာ ရှိနေနိုင်ပြီး ကျန်ဒေသတွေမှာ မြင့်မားအဆင့်မှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ နေရာကျဲကျဲ၊ ကျန်ဒေသတွေမှာ နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပါမယ်။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by ဒေါက်တာထွန်းလွင်
ကဏ္ဍ မိုးလေဝသသတင်း, ရာသီဥတု
မုန်တိုင်းငယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်နေ
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ မုန်တိုင်း ငယ်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက် နေတယ်လို့ မိုးဇလ ဌာနက ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲ အချိန် ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တို့မှာ မုတ်သုံလေ အားကောင်းရာမှ အားအလွန် ကောင်းနေပြီး မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်မှာ ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက် လှိုင်းကြီးနိုင်ပြီး ၁ နာရီလျှင် မိုင် ၄၀ အထိ တိုက်ခတ်နိုင် တယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။
မုန်းတိုင်းငယ်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် အများဆုံး လေတိုက်နှုန်း ၁ နာရီ မိုင် ၄၀ ခန့်နဲ့ တိုက်ခတ်နေဆဲ ဖြစ်တယ် လို့လည်း မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်က ခန့်မှန်းပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ လေ၊ လှိုင်းနဲ့ မိုးကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းမှာ မုန်တိုင်း အားပျော့ပျက်ပြယ်သွားမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- Dr Tun Lwin
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/211987
ဒေသခြောက်ခုမှာ နေရာကွက်မိုးကြီးပြီး ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွေမှာ လှိုင်းလေ ပြင်းထန်နိုင်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ် အော်မှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ လေဖိ အားနည်း ရပ်ဝန်း အရှိန်ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အပါ အ၀င် ဒေသခြောက်ခုမှာ သုံးရက် အတွင်း နေရာကွက် မိုး ကြီးနိုင်ပြီး ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွေမှာ လှိုင်းနှင့်လေ ပြင်းထန်နိုင် တယ်လို့ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတိပေး ထားပါ တယ်။
ဇွန်လ ၁၀ ရက် တိုင်းတာ ချက်အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအရှိန်ကြောင့် ဇွန်လ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၃ ရက်အတွင်း ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာ ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်း၊ ရခိုင်၊ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ နေရာကွက် မိုးကြီးနိုင်ပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မယ့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင် တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
‘‘အခုက မြစ်ရေတွေလည်း နည်းနည်းတက်လာတယ်။ ဒီကြားထဲ မိုးကလည်း ဒေသအနှံ့ရွာနိုင်ပြီး နေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တာကြောင့် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကို သတိထားဖို့ လိုတယ်။ ပင်လယ်နဲ့ ကမ်းရိုးတန်း မှာက မိုးရော၊လေရော၊လှိုင်းရော သတိပြုဖို့လိုတယ်’’လို့ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက ပြောပါတယ်။
မိုးလေ၀သပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကလည်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းက မုန်တိုင်းငယ်အဆင့် ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဇွန်လ ၁၂ ရက် မနက်ပိုင်းတွင် အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်စပ်အနီး ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လက်ရှိရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအနှံ့နဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ မိုးကောင်းနိုင်ပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနဲ့ မိုးတိမ်တောင်အန္တရာယ်ကို အထူးသတိထားဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။
Source & Photo : 7DayDaily
From : Duwun by WL
Originally published at - http://www.duwun.com.mm/news/local/-id6817882.html
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Monday, June 12, 2017 No comments:
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် 03B မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေနေ
မုန်တိုင်းငယ် 03B ရဲ့ အများဆုံး လေတိုက် နှုန်းမှာ 31 knots (36 mph) ရှိနေ ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကမ္ဘာ့ မိုးလေဝသ ဌာန အသီးသီးမှ မုန်တိုင်းငယ် အင်အား အဆင့် သတ်မှတ်ပုံကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
တိုကျို(ဂျပန်)……. < 33 knots
မုန်တိုင်းငယ် 03B ဟာ မြောက်ယွန်းယွန်း အရပ်ကို ဦးတည်ရွေ့လျားပြီး ဇွန်လ ၁၂ ရက် ညနေပိုင်းမှာ အိန္ဒိယ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် အနီးမှ ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက် သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။
မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့် ရခိုင်နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ကမ်းလွန်ဒေသတွေမှာ မကြာခဏ မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်နိုင်ပြီး ခေတ္တခဏမျှ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။
မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေဟာ တစ်နာရီ မိုင် ၄၀ ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီး လှိုင်းအမြင့် (၅-၈) ပေခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်းတို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးရွာနိုင်ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသအလိုက် မိုးကြီးနိုင် ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/211761
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, June 11, 2017 No comments:
၂ဝ၁၇ ခု၊ ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက် ဓါတ်ပုံ - မိုးဇလ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပေါ် aနတဲ့ လေဖိ အားနည်း ရပ်ဝန်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင် ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ် ဒေသတွေမှာ မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန် ပါတယ်။
အဲဒီ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ မုန်တိုင်းငယ် အဖြစ် ရောက်ရှိ နိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက ပြောပါတယ်။
"အခုကတော့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအနေနဲ့ပဲ ဆက်လက်တည်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ပိုတော့အားကောင်း လာနိုင်တဲ့ အနေထားတော့ရှိတယ်။ မုန်တိုင်းငယ် အဆင့်လောက်တော့ သူက ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် မနက်ဖြန်အစောပိုင်းလောက်မှာ ရောက်နိုင်တဲ့ အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်။
ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ဆီမှာ မိုးများမယ့်အနေထားပေါ့နော်။ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းတွေရော၊ အလယ်ပိုင်းတွေရော၊ ရခိုင်နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာ မိုးပျံ့ပျံ့နှံ့နှံ့ရွာမယ်"
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအရှိန်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ မိုးရွာပြီး နေရာကွက်ကျား မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိ ပါတယ်။
ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ မွန်ပြည်နယ်မှာ နေရာကွက်ပြီး မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။ နောက် ၂ ရက်လောက်မှာတော့ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ မိုးများ လာနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း ပိုမို အားကောင်း လာပြီး မုန်တိုင်းငယ် အဖြစ် ရောက်ရှိနိုင်
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အလယ် ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ လေဖိ အားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ပိုမို အားကောင်း လာနေပြီး၊ ဒီနေ့ ညနေ ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခု အဖြစ်ကို ရောက်ရှိ လာနိုင် တယ်လို့ မိုးလေ၀သ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
မုန်တိုင်း ငယ်ဟာ မြောက် အရှေ့စူးစူး (North-northeastwards) ကို ဦးတည်ရွေ့လျှားနိုင်ပြီး၊ ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့ မနက် ပိုင်းမှာ အိန္ဒိယ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ နယ်စပ် အနီး ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် မယ်လို့ ခန့်မှန်း ရကြောင်း ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
အများဆုံး လေတိုက်နှုန်း တနာရီမိုင် ၄၀ နှုန်းလောက် ဇွန် ၁၁ ရက် ညနေပိုင်းမှာ စတင် တိုက်ခတ်နိုင် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/211566
တစ်ပတ်စာ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် (ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့)
မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်ရဲ့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့ တစ်ပတ် အတွင်း မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် ရုပ်သံကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, မိုးလေဝသသတင်း, ရာသီဥတု
မုတ်သုံဝင်ပြီးနောက် ဒေသအနှံ့ မိုးတိမ်တောင် အန္တရာယ် မြင့်မားနေ
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ လုံးသို့ အနောက်တောင် မုတ်သုံလေ ၀င် ခဲ့ ပြီးနောက် မြန်မာ နိုင်ငံ ဒေသ အနှံ့ တွင် မိုးတိမ်တောင် အန္တရာယ်မြင့် မားနေကြောင်း မိုးလေ၀သ ပညာ ရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က သတိ ပေးသည်။
အနောက်တောင် မုတ်သုံ လေသည် ဇွန်လ ၁ ရက်တွင် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ လုံးသို့ အပြီးသတ် ၀င်ခဲ့သည်။
အနောက်တောင် မုတ်သုံ လေ ၀င်ပြီး တစ်ပတ်ခန့် ကြာသည် အထိ လေထု မငြိမ်မသက် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး လေပြင်းနှင့် မိုးကြီး အန္တရာယ် ဖြစ်စေသည့် မိုးတိမ်တောင် အန္တရာယ် ရှိနေသည်။
ဇွန်လ ၃ ရက်တိုင်းတာချက် များအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် မိုးတိမ် တောင်အခြေအနေ အများဆုံး ဖြစ်ပွားနေကာ ကျန်ဒေသများ တွင် သတိပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ပြော သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုဖြစ် စဉ်အရ နွေကာလ (မတ်လ)က စတင်ပြီး လေပြင်းနှင့် မိုးကြိုးအန္တ ရာယ်ဖြစ်စေသည့် မိုးတိမ်တောင် အန္တရာယ် စတင်ရင်ဆိုင်ရသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ အနောက် တောင်မုတ်သုံလေ၀င်ရောက်ပြီး တစ်ပတ် (ခုနစ်ရက်ခန့်)ကြာမှ သာ မိုးရာသီ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ပြီး မိုး တိမ်တောင်အန္တရာယ်လျော့ကျ ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအနှံ့တွင် မတ်လ ၆ ရက်က စတင်ကာ လေပြင်း တိုက်ခတ်ခြင်း နှင့် မိုးကြိုး ပစ်ခြင်းတို့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပြီး မေလကုန် အထိ မိုးကြိုး ထိမှန် ၍ လူ ၃၀ ကျော်သေဆုံး ခဲ့ရကာ ၁၅ဦး ဒဏ်ရာရပြီး လေပြင်းကြောင့် နေအိမ်နှင့် သစ်ပင်ပိ၍ သေဆုံးသူ ၃၀ ဦးခန့် ရှိကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဦးစီးဌာနမှ သတင်း ရရှိသည်။
(ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
From :7DAy daily news - By: အောင်သစ်လွင်
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/97983
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, June 04, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ မိုးလေဝသသတင်း, သဘာဝဘေးအန္တရယ်များ
တစ်ပတ်စာ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် (ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့)
မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်ရဲ့ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့ တစ်ပတ် အတွင်း မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်
ရုပ်သံကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။